China Plastic jekiseni anoumba Manufacturer uye nokutengesa | Mestech
Plastic jekiseni muforoma chishandiso chekugadzira zvigadzirwa zvepurasitiki, izvo zvinonyanya kushandiswa mukugadzira kwakawanda. Jekiseni muforoma inogona kupa yakakwana chimiro uye chaiyo saizi yezvigadzirwa zvepurasitiki zviri nyore uye nekukurumidza.
Chii chinonzi plastiki jekiseni kuumbwa
Plastic jekiseni muforoma(jekiseni muforoma) imhando yemidziyo yekugadzira zvigadzirwa zvepurasitiki, uye zvakare chishandiso chekupa zvigadzirwa zvepurasitiki chimiro chakazara uye saizi chaiyo. Jekiseni Kuumbwa rudzi rwekugadzirisa nzira inoshandiswa mukugadzira kwakawanda zvimwe zvikamu zvakaoma. Zvikurukuru, ipurasitiki yakanyungudutswa nekupisa inojowa muforoma mhango neiyo jekiseni kuumbwa muchina pasi pekumanikidza, uye ndokutonhora uye kusimbiswa kuti uwane zvigadzirwa zvakaumbwa.
Zvinoitwa jekiseni muforoma
1.Injection muforoma inogona kuumba epurasitiki zvikamu zvine yakaoma chimiro, chaiyo saizi uye yakanaka yemukati mhando panguva imwe chete.
2.Kunyange hazvo chimiro chepurasitiki chichigona kusiyana zvakanyanya nekuda kwekusiyana uye mashandiro epurasitiki, chimiro uye chimiro chemapurasitiki zvigadzirwa uye mhando yejekiseni muchina, chimiro chekutanga chakafanana. Foroma iri ainyanya rinoumbwa achidira hurongwa, tembiricha marongedzero maitiro, Anoumba zvikamu uye STRUCTURAL zvikamu. Iyo yekudurura system uye zvikamu zvekuumba ndizvo zvikamu zviri zvakanangana zvakananga nemapurasitiki uye zvinoshanduka nemapurasitiki uye zvigadzirwa. Iwo akanyanya kuomarara uye anochinja zvikamu mupurasitiki muforoma, izvo zvinoda chepamusoro kugadzirisa kupedzisa uye kunyatsoita.
Zvinoumba jekiseni anoumba
Iyo jekiseni muforoma inoumbwa neinofamba fosi uye yakatarwa muforoma. Iyo yekufambisa muforoma yakaiswa pane inofamba template yeiyo jekiseni kuumbwa muchina, uye yakatarwa chakuvhuvhu yakaiswa pane yakatarwa template yeiyo jekiseni kuumbwa muchina. Munguva yejekiseni kuumbwa, iyo inotakurika muforoma uye yakagadziriswa muforoma yakavharwa kuti iite iyo inodurura system uye iyo mhango mhango. Kana chakuvhe chikavhurwa, iyo inotakurika furu uye yakagadziriswa muforoma inopatsanurwa kutora zvigadzirwa zvepurasitiki. Kuti uderedze rinorema basa rekugadzira dhizaini uye kugadzira, mazhinji majekiseni anoumba anoshandisa akajairwa mafomu base.
Mhando dzeforoma zvinoenderana nekushandisa hunhu
(1) Hot mumhanyi anoumba
Nerubatsiro rwekupisa mudziyo, mapurasitiki mune anodurura system haazogadzikane uye haazokuvadzwa nechigadzirwa, saka inonziwo inomhanya isina kufa. Makanaka Iyo ine hunyoro hwakanaka pane yakaderera tembiricha uye yakanaka yekupisa kugadzikana pakakwirira tembiricha. 6) Inotarisisa kumanikidza uye haina kuyerera isina kumanikidza, asi inogona kuyerera kana kumanikidzwa kuchishandiswa. 7) Yakanaka chaiyo kupisa, kuti itonhore nekukurumidza mufa. Mapurasitiki anowanikwa kune vanomhanya vanopisa ari PE, ABS, POM, PC, HIPS, PS. Kune maviri marudzi evazhinji vanopisa vanomhanya: 1) kudziyisa mumhanyi modhi 2) adiabatic mumhanyi maitiro.
(2) Zvakaoma kuumbwa
Ndiro yesimbi inoshandiswa mukati mekufa kwemukati inoda kurapwa kwekupisa mushure mekutenga, senge kudzima uye carburizing, kusangana nezvinodiwa zvekushandisa. Yakadai jekiseni muforoma inonzi yakaoma kufa. Semuenzaniso, iyo yemukati kufa inotora H13 simbi, 420 simbi uye S7 simbi.
(3) zvakapfava anoumba (pazasi 44HRC)
Iyo simbi inoshandiswa muforoma yemukati inogona kusangana nezvinodiwa zvekushandisa pasina kupisa kurapwa mushure mekutenga. Yakadai jekiseni inonzi nyoro muforoma. Kana iyo yemukati kufa ikagadzirwa neP20 simbi, hwamanda simbi, 420 simbi, NAK80, aluminium uye beryllium mhangura.
(4) Double-jekiseni anoumba
A-jekiseni chakuvhuvhu muforoma umo maviri epurasitiki zvinhu zvinoiswa jekiseni pane imwechete jekiseni kuumbwa muchina uye kuumbwa kaviri, asi chigadzirwa chinongodzingwa kamwe chete. Kazhinji, ichi Kuumbwa kwacho kunonziwo maviri-zvinoriumba jekiseni Kuumbwa, iyo inowanzo kuve inopedzwa neyakagadzika kuumbwa uye inoda yakakosha maviri-akapfura jekiseni Kuumbwa muchina
(5) Jekiseni Kuumbwa ne-muforoma kushongedzwa & mu-chakuvhuvhu kunyora
Plastic jekiseni anoumba kupatsanura ne gating system
Mapurasitiki epurasitiki anogona kukamurwa muzvikamu zvitatu zvinoenderana nemhando dzakasiyana dzegating system.
(1) Edge gedhi muforoma (mbiri-ndiro chakuvhuvhu): Mumhanyi uye gedhi zvinokuvadzwa pamwe chete nechigadzirwa pamutsetse wekuparadzanisa. Dhizaini ndiyo yakapusa, yakapusa kugadziriswa, uye mutengo wakaderera. Naizvozvo, vanhu vazhinji vanoshandisa hombe simbi system kuti ishande. Maumbirwo epurasitiki muforoma akapatsanurwa kuita zvikamu zviviri: zvine simba muforoma uye yakatarwa muforoma. Chikamu chinofambiswa chemuchina wejekiseni ndicho chikamu chinofambiswa (kazhinji chikamu chekubvisa), uye kusashanda pamagumo ejection yemuchina wejekiseni unowanzonzi chiganda chekugadzirisa. Nekuti iyo yakamisikidzwa chikamu chehombe yemhino kufa inowanzo kuve nemaviri mahwendefa esimbi, inonziwo iyo mbiri-ndiro chakuvhuvhu. Iyo-mbiri-ndiro muforoma ndiyo yakapusa chimiro cheiyo hombe yemuromo mould.
(2) Pin-poindi gedhi muforoma (matatu-ndiro chakuvhuvhu): uyo anomhanya uye gedhi haasi pamutsetse wekuparadzanisa, kazhinji zvakananga pachigadzirwa, saka zvakanyanya kuomarara kuronga boka remubhedha wekuparadzanisa mutsetse, uye zvakaoma kugadzirisa . Yakanakisa kamwene system inowanzo sarudzwa zvinoenderana nezvinodiwa muchigadzirwa. Chikamu chakasarudzika cheyeye bhuru molg inowanzo kuve nematatu mahwendefa esimbi, saka inonziwo "matatu ndiro muforoma" yerudzi urwu rweyakafa kufa. Iyo matatu-ndiro chakuvhuvhu ndiyo yakapusa chimiro yeiyo yakanaka kamwene mould.
(3) Hot mumhanyi muforoma: Maumbirwo erudzi urwu rwefa anonyatso fanika neaya emuromo wakanaka. Musiyano mukuru ndewekuti mumhanyi ari mune imwe kana akawanda anopisa emumhanyi mahwendefa uye anopisa maswiti ane tembiricha yenguva dzose. Iko hakuna chinotonhora zvinhu zvinokanganisa uye mumhanyi negedhi zviri zvakananga pachigadzirwa. Naizvozvo, mumhanyi haadi kukanganiswa. Iyi sisitimu inonzi zvakare nozzle system, iyo inogona kusevha mbishi zvigadzirwa uye zvinoshanda. Kana iri yezvinhu zvinodhura mbishi zvinhu uye zvakakwirira zvinodiwa kune zvigadzirwa, zvinonetsa kugadzira uye kugadzirisa, uye mutengo weanofa uye mafuru akakwirira. Hot mumhanyi hurongwa, inozivikanwawo seinopisa mumhanyi system, kunyanya ine inopisa mumhanyi ruoko, inopisa mumhanyi ndiro uye tembiricha kudzora yemagetsi bhokisi. Yedu yakajairwa inopisa mumhanyi system ine maviri mafomu: imwechete-poindi inopisa mumhanyi uye yakawanda-poindi inopisa inopisa. Imwe poindi inopisa suo ndeyekujovera epurasitiki yakanyungudutswa yakanangana nemukati neyakaipisisa ruoko ruoko rwegedhi, iyo yakakodzera kune imwechete mhango uye rimwe chete gedhi plastiki muforoma; yakawanda poindi rinopisa gedhi kupatsanura zvinhu zvakaumbwa mubazi rega rega reSviro reHove neyakaipisa ndiro uye wopinda mukati mevhu. Iyo yakakodzera kune imwechete mhango, yakawanda poindi feed uye yakawanda-mhango
Kushandiswa epurasitiki jekiseni anoumba
Jekiseni muforoma yakakosha maitiro ekushandisa ekugadzira akasiyana maindasitiri zvigadzirwa. Nekukurumidza kuvandudzwa kwepurasitiki indasitiri uye kusimudzira uye kushandiswa kwezvigadzirwa zvepurasitiki munzvimbo dzeindasitiri senge ndege, muchadenga, zvemagetsi, michina, ngarava uye mota, izvo zvinodikanwa zvezvigadzirwa paforoma zvakare zvakakwirira uye zvepamusoro. Iyo yechinyakare muforoma dhizaini nzira yatadza kuzadzisa zvinodiwa nhasi. Inofananidzwa neyechinyakare dhizaini dhizaini, komputa-yakabatsira dhizaini CAE tekinoroji ine zvakanakira zvikuru mukuvandudza kugadzirwa, kuona chigadzirwa mhando, kudzikisira mutengo uye kudzikisa basa kusimba.
1. Zvigadzirwa zvemagetsi uye zvekutaurirana:
2. Hofisi michina;
4. Midziyo yemumba;
6. Kuchengetedzwa kwezvokurapa uye kwezvakatipoteredza;
7. Maindasitiri nzvimbo;
10. Zvokuvakisa, midziyo yekubikira neyechimbuzi nemidziyo
Mestech inyanzvi inogadzira inoita jekiseni kugadzira kugadzira uye jekiseni kugadzirwa kweanoda kusvika makore makumi maviri. Tine rakaisvonaka injiniya timu uye akapfuma kugadzira ruzivo. Tinogona kugadzira uye kuburitsa yepamusoro epurasitiki jekiseni muforoma kune vatengi vedu. Yedu jekiseni inoumba inovhara zvemagetsi, zvemagetsi, mota, zvekurapa, zvekufambisa uye maindasitiri michina. Kana uchida, tapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
Pashure: Die vachikanda anoumba
Zvadaro: Hot mumhanyi muforoma